Al Shabaab oo weeraray Lamu | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Al Shabaab oo weeraray Lamu
Al Shabaab oo weeraray Lamu
Xoogaga ka tirsan ururka Al-shabaabka ka howlgala gudaha Kenya ayaa weerar dhabagal ah oo khasaare dhaliyay waxa ay ku qaadeen Jaziirada Lamu oo ka tirsan dalka Kenya, sida ay warbaahinta gudaha ee dalkaasi.
Weerarkan Shabaabka ay qaadeen ayaa waxaa loo dhigay Gaari, kaasi oo ku socdaalayay wadada isku xirta degaanada Gamba iyo Witu oo ka wada tirsan Jaziirada Lamu.
War Shabaabka ay ku soo qoreen baraha ay wararkooda ku faafiyaan ayaa waxa ay ku sheegeen in ay gubeen Gaariga ay gacanta ku dhigeen, sidoo kalena ay dileen laba qof oo Kenyaati ah, kuwaasi oo Gaariga la socday.
Ciidanka Dowladda Kenya ayaa howlgal ka wadda degaano hoosyimaada degmada Luma ee dalka Kenya, kadib markii Shabaab ay weerareen Lamu, sidoo kalena laga cabsi qabo in ay weeraro geystaan.
Taliyaha qeybta Booliska Lamu ayaa warbaahinta u sheegay in howlgalka lagu baadi goobayo dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab, kuwaas oo inta badan weerar dhabagal ah u geystay Ciidanka Dowladda ee ku sugan xuduudka u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya.